Ireo Blaogera Ao Amin’ny India Virtoaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 6:08 GMT
Toerana iray hafa ny India Virtoaly, ary ireo fivoaran-draharaha tamin'ity herinandro teny anaty tontolo virtoaly dia nampiseho nazava tsara sy nanasongadina fa azo dinganina ireo sàkana jeografika sy ireo adiresy IP ary afaka mitambatra noho ny antony iray iombonana ny vahoaka. Niaraka tonga sy nanoratra ireo blaogera manerana izao tontolo izao manana fiaviana Indiàna, ary nanoratra dia nanoratra. Liana amin'izay nosoratan'ireo blaogera ny media mahazatra manerana izao tontolo izao, ary mihevitra aho fa naneho nazava tsara fa hery iray mahomby ireo blaogera. Raharaha hafa koa ny hoe niezaka ny hahazo mpijery / mpamaky mismisy kokoa avy amin'io fanandramana manontolo io ny sasantsasany amin'ireo media mahazatra hatrizay (ao India) .
Zo hahazo vaovao, zo hamaky sy hanoratra blaogy, ary zo hampiasa VOIP. Nanoratra sy namoaka ny eritreriny momba ireny lohahevitra ireny ireo blaogera, tamin'ny fomba haingana sy masiaka. Taorian'ny fisafotofoton'ireo zo samihafa ireo tao anatin'ity tontolo feno fifandraisana goavana sy virtoaly ity, maka fiatoana tena mendrika antsika isika ary manao tsidika virtoaly an'ireo sarin'ny voahary mahafinaritra.
Ireo blaogy, VOIP, ary ny Zo hahazo vaovao
Ireo blaogy avy amin'ny blogspot sy typepad ary antontana vohikala iray no voaràra tao India tamin'ny herinandro lasa teo. Manana ny lisitra feno mikasika ireo blaogera voakasik'io lohahevitra io i Desi Pundit, mpanangona ireo blaogy ao India, ny asa manodidina an'io izay noforonin'ireo bilaogera mpahay teknolojia ho an'ireo mpamaky azy mba hidirana amin'ny blaogin-dry zareo. Manipika ilay fizarana manontolo ilay lahatsoratra mandreraka. Nalàna tamin'ny ampahany ny fandraràna ary nandritra ny faran'ny herinandro, andrasana ny hahafahana miditra amin'ireo blaogy rehetra. Mikisaka amina lohahevitra iray vaovao sy andiana olana hafa indray momba ny sivana ny adihevitra ankehitriny. Mbola manana lahatsoratra iray mandreraka momba ireo olana vaovao manontolo ireo i Desi Pundit.
Manana lahatsoratra mikasika ny Lalàna momba ny Zo Hahazo Vaovao ao India i Sanat Mohanty. Manoratra izy fa:
“Hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay, ezaka iray niarahan'ireo fikambanana mitaiza olom-pirenena, ireo fikambanana tsy miankina, ireo olona tsirairay ary fantsona TV fampahalalam-baovao iray manan-danja manana ny toerany – NDTV sy ireo gazety nasionaly goavana no nivondrona mba handefa fanentanana nasionaly iray… “
Vakio mba hahafantarana izay hafa lazain'i Sanat mikasika io lohahevitra io.
Manana lahatsoratra iray momba ny Lalàna mahakasika ny Zo Hahazo Vaovao i Vishal ary manoratra izy hoe:
“Ato ho ato, ho afaka mamaky ny sata mikasika ny Zony Hahazo Vaovao ireo mitalaho izany
fitalahoana mivantana manomboka eo amin'ny fandraiketana ka hatramin'ny fanapahan-evitra farany.”
Manoratra i Karthik Rao Cavale hoe:
“Ny Zo Hahazo Vaovao dia zo fototra iray. Ny zo izay tsy nomen'ny fanjakana antsika nandritra ny 58 taona…”
Voalohany indrindra, ireo blaogy ary ankehitriny ny Internet Telephony, vakio hoe Skype sy ny sisa no tian'ireo ISPs Indiana sakànana, ary lasa sahirana noho io fivoaran-draharaha vaovao io i Deponti. Manomboka ny lahatsorany toa izao izy:
“Raha ny mahazatra, aza manao blaogy momba ireo lohahevitra tahaka izany, fa maha-tera-tsemboka ny vozon-akanjoko ny olana toa an'io.”
Tohizo ny famakiana mba hahitàna izay mampitombo ny fahasahiranany sy ny maha-tera-tsemboka azy
Ireo sary. Sarinà Vine Snake dia an'i Kalyan Varma nahazoany ny dingana farany teo amin'ny fifaninanana nataon'ny BBC Wildlife. Mpaka sary iray sady mpankafy ny zavaboahary, ny blaogin'i Kalyan dia toerana iray mahafinaritra sy mahasondriana ahitàna ireo sary mikasika ny voahary, ny biby ary ny zavamaniry ao Bangalore sy ireo faritra hafa ao India.
5 andro izayPakistana